ဘောလုံးပြန်ကစားချင်တဲ့ အဂွေရို ၊ လီဗာပူး အတွက် သတင်းကောင်း ၊ အာရှ ကိုလာမယ့် မန်ယူနိုက်တက် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ လာမယ့် နွေရာသီမှာ အာရှ တိုက်ကို ခရီးထွက်ပြီး ခြေစမ်းပွဲတွေ ကစားသွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ လီဗာပူး အသင်းနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ ခြေစမ်းပွဲ ကစားမှာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒိ နောက်မှာတော့ ဇူလိုင် ၁၅ နဲ့ ၁၉ ရက်နေ့တွေမှာ မဲလ်ဘုန်း စီးတီး ၊ ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်းတွေနဲ့ သြစတြေးလျ မြေပေါ်မှာ ခြေစမ်းပွဲတွေ ကစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
စကော့တလန် ကလပ် ရိန်းဂျားစ် အသင်းကတော့ တနိုင်ငံတည်း မဟာပြိုင်ဘက် ဆဲလ်တစ် အသင်းနဲ့ သြစတြေးလျ နိုင်ငံ ဆစ်ဒနီ မှာ ကစားမယ့် ရာသီကြို ခြေစမ်းပွဲကို ပရိသတ်တွေရဲ့ အပြင်းအထန် ဝေဖန်မှုကြောင့် ဖျက်သိမ်း လိုက်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ်ပြည့်ပြီး နွေရာသီမှာ ထွက်ခွာ တော့မယ့် ဂျာမန် ခံစစ်မှူး အန်တိုနီယို ရူးဒီဂါ ရဲ့ အေးဂျင့်နဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် နည်းပြ အယ်လီဂရီ က သူဟာ မနှစ်က နွေရာသီ တုန်းက ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို လာရောက် နည်းပြဖို့ သဘောတူထားခဲ့ ပေမယ့် ယူဗင်တပ် က ပြန်လည် ကမ်းလှမ်း လာခဲ့ချိန် မှာတော့ စပိန် ကလပ် ကို မလာ နိုင်တော့ကြောင်း ရီးရဲ ဥက္ကဌ ပီရက်ဇ် ကို အသိပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူးလေး မေဆင် ဂရင်းဝုဒ် ကို အသင်းရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ထဲမှာ ပြန်လည် ထည့်သွင်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဂရင်းဝုဒ် ဟာ ဇန်နဝါရီ တုန်းက နေအိမ်အကြမ်းဖက်မှု ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကား ကျူးလွန်မှုတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင် ခံခဲ့ရကာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အာမခံ နဲ့ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုပါ အချိန်ကတည်းက ဂရင်းဝုဒ် ဟာ ယူနိုက်တက် နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း မဆင်းရတော့သလို အသင်းသား စာရင်းကနေလည်း ထုတ်ပယ်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ယမန်နေ့မှာတော့ ဂရင်းဝုဒ် ဟာ အသင်းရဲ့ Database ထဲကို ပြန်လည် ပါဝင်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည် သက်သာ လာပြီး လေ့ကျင့်မှုတွေ စတင် ပြုလုပ် နေတဲ့ လီဗာပူး နောက်ခံလူ အလက်ဇန်းဒါး အာနိုးလ် ဟာ မန်ချက်စတာ စီးတီး နဲ့ ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲအမီ ကြံ့ခိုင်မှု အပြည့်အ၀ ရရှိလာဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူးဟာ စကော့တလန် ယူ-၁၇ ကြယ်ပွင့်လေး ဘန်ဒွတ် ကို ပေါင် ၆ သိန်း ဝန်းကျင် နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်တော့မယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ကလပ် လိုင်ယွန် အသင်းဟာ ယူကရိန်း ကလပ် ရှက်တာဒိုးနက် တောင်ပံ ကစားသမား အီတေး ကို ခေါ်ယူ စာချုပ် လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
UEFA ဟာ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ယူကရိန်း ပြည်တွင်းက ဘောလုံးသမားတွေ အတွက် အထူး အပြောင်းအရွှေ့ ကာလ သတ်မှတ်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပေါ်တူဂီ နောက်ခံလူ ဖွန်တေ က ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ ဘောလုံး ဆက်ကစားဖို့ စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းပြ နေဦးမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၄ ယူရို ပြိုင်ပွဲ ကိုပင် ပါဝင် ကစားနိုင်ချေ ရှိသေးတယ်လို့ ခန့်မှန်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း ပေါလ် ပါကား ကတော့ ဂလေဇာ မိသားစု ဆက်လက် ရှိနေသရွေ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ဟာ အရင်တုန်းကလို အောင်မြင်မှုတွေ ပြန်လည် ရရှိဖို့ ဝေးကွာ နေဦးမယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှူး ရိုမီရို လူကာကူ ဟာ ပွဲထွက် တိုက်စစ်မှူး နေရာကို ကိုင် ဟာဗက်ဇ် ထံ ပေးအပ် ထားရမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မပျော်မရွှင် ဖြစ်နေကာ အီတလီ ကို ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား အပြီး ကတည်းက လက်ရွေးစင် အသင်းကနေ အနားယူခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ ခံစစ်မှူးကြီး ပီကေး ဟာ စပိန် အသင်းမှာ ပြန်လည် ကစားဖို့ စဉ်းစား နေတယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲကနေ ရှုံးနိမ့်အပြီးမှာ ကွင်းအတွင်း ပရိသတ်တွေ ဝင်ရောက် သောင်းကျန်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ဂျီးရီးယား ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖီဖာ က ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် သွားမယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
နှလုံးဝေဒနာ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့တာကြောင့် ဘောလုံး ကစားခြင်း ကနေ အနားယူခဲ့ရတဲ့ မန်စီးတီး နဲ့ အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အဂွေရို က သူဟာ လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြန်လုပ်လိုပြီး ဘောလုံး ပြန်ကစားဖို့ အမြဲ စိတ်ကူး ရှိနေ ပါတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် ဟာ ဒေါ့မွန် ရဲ့ အင်္ဂလန် ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ဂျုဒ် ဘယ်လင်ဟမ် ကို လာမယ့် ၂၀၂၃ နွေရာသီမှာ ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ပစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဗီလာ နည်းပြ စတီဗင် ဂျရတ် ဟာ လိဒ် ကွင်းလယ်လူ ကယ်လ်ဗင် ဖိလစ် ကို ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ အတွက် ဗီလာ ကစားသမား ဒေါက်ကလပ် လူးဝစ် ကို ရောင်းထုတ် သွားဖွယ် ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ် မှာတော့ ဝုဖ်ဘတ် အသင်းဟာ အာဆင်နယ် အမျိုးသမီး အသင်းကို ၂-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ် ကို တက်ရောက် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဆီမီး ဖိုင်နယ် မှာတော့ ဝုဖ်ဘတ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ ၊ လိုင်ယွန် နဲ့ PSG အမျိုးသမီး အသင်းတို့ ဆုံတွေ့ ကြမယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။